Ndwendwela iBritane NGOKU ukuba Ugonyiwe! Umphathi we-ETOA uTom Jenkins uxela kwangaphambili ukubuyiswa koKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Ndwendwela iBritane NGOKU ukuba Ugonyiwe! Umphathi we-ETOA uTom Jenkins uxela kwangaphambili ukubuyiswa koKhenketho
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • udliwano • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Umbutho wezoKhenketho waseYurophu (i-ETOA) umele icandelo elibalulekileyo loShishino lwaseYurophu loKhenketho noKhenketho. Umphathi we-ETOA u-Tom Jenkins ukwaligorha lezokhenketho kwiNkqubo yeMbasa yeHlabathi yeQonga lezoKhenketho kwaye uhlala ethe ngqo kwaye ethetha phandle kuyo yonke le ngxaki ye-COVID-19.
NGOKU kuthetha u-Agasti 2, 2021. I-WHO ithetha iindwendwe ezivela e-United States nakwi-European Union-kodwa hayi abemi base-France-abasayi kuphinda babeke bodwa xa besiya eNgilane.
Umgaqo omtsha usebenza eNgilane, kwaye abaphathi baseScotland naseWales bathi baya kulandela.
ETOA Umphathi omkhulu u-Tom Jenkins ucinga ukuba oku kuza emva kwexesha eNgilane, kodwa kuya kunceda, kuba kuncede ezinye iindawo ze-EU ukuqala ukubuyela kwezokhenketho.
Ukuya eBritane kwakhona kungekudala, kodwa hayi ukuba ungumFrentshi.
Emva kokubhengezwa kukarhulumente wase-UK ukuba avumele abemi abagonywe ngokupheleleyo be-European Union (i-EU) kunye ne-United States ukuba bangene eNgilani ngaphandle kwesithintelo, uTom Jenkins, i-CEO ye Umbutho wezoKhenketho waseYurophu (i-ETOA) wathi:
“I-UK iyishiye kude kakhulu ukuba iyeke ukufaka amanqaku ayo. Iipesenti ezingama-80 zalo lonke utyelelo oluvela e-US lwenzeka phakathi kukaJanuwari-Septemba, apho elona xesha liphezulu linguSeptemba, ixesha elijikeleze iholide yabasebenzi baseMelika.
“I-EU yongeze i-US 'kuluhlu lwabamhlophe' ngoJuni, kwaye amalungu e-ETOA akwazi ukuhlangula inxenye yeli xesha ngokuthengisa. Iiphakheji zokhenketho ezingenayo kumazwe avunyiweyo e-EU kubantu baseMelika. "
Inani leendwendwe zaseMelika zeza ngoJulayi, uninzi luya kube lusenza njalo ngo-Agasti. Kwaye konke kusetelwe ixesha elifanelekileyo lokuhamba likaSeptemba kwindawo yaseSchengen. E-UK, iinkqubo zokubhukisha zithetha ukuba uAgasti noSeptemba sele beyekisiwe. I-UK yaphulukana nexesha layo eliphezulu ekuqaleni kukaJulayi.
“Kuza kubakho ukuchacha. Ukubhukisha okokugqibela kuya kwenzeka eLondon. Elinye leshishini lika-Okthobha liya kuhlangulwa. Ukungena kweendwendwe zaseMelika ezenzeka ezixekweni nakwimimandla ye-EU azizukwenzeka e-UK ngo-2021, ”wongeze watsho uJenkins.
NgoSeptemba 2020, uTom Jenkins wanika isishwankathelo seLizwe lezoKhenketho ku eTurboNews.